Iwo akanakisa sniper pfuti muCOD Mobile Season 9 | la-manette.com
Iwo akanakisa sniper pfuti muCOD Mobile Season 9
4 novembre 2021 ndima Corinne Rancourt
Kudevedzwa pabasa Nharembozha pasina kupokana imwe yeakanakisa kurwa royale mitambo pane mobile. Chimwe chezvinhu zvinoita kuti mutambo uyu uve wakanaka ipfuti dzayo dze sniper. Asi vatambi vanowanzo shamisika kuti ndeipi yakanakisa Sniper Rifle muCOD Nhare, kunyanya kana iwe uri mutsva kumutambo.
Ndokusaka muchinyorwa chino, tiri kuzonyora ese akanakisa Sniper Pfuti muCOD mobile Season 9 Nightmare uye tozviisa zvichienderana nehwaro stats uye mu-mechi kuita.
Yese pfuti dze sniper muKufona KweDuty Mobile Mwaka 9
Ramba uchifunga kuti zviverengero zviri pamusoro ndiwo masisitimu epasi pese pfuti dze sniper muCOD Mobile; vatambi vanogona kuwedzera kana kudzikisira zviverengero izvi zvinoenderana neakawanda mapuropu akapihwa mukugadzirisa pfuti basa repfuti muCOD Nhare.
Verenga zvakare: Iwo akanakisa maLMG muMwaka 9 wekufona kweDuty Mobile
Iwo matatu akanakisa sniper pfuti muKufona KweDuty Mobile Mwaka 3
Kunyangwe iwe uine ruzivo rwese nezvese pfuti dze sniper muCOD Nhare pasi pedenga rimwe pano, vamwe vatambi vangangove vachinetsekana pakusarudza yakanakisa sniper pfuti muCOD Mobile kwavari. Ndizvo chaizvo nekuda kweichi chikonzero tiri kuzokuzivisa iwe kune matatu emhando yepamusoro pfuti kubva kuCOD Mobile.
Sniper Locus muKufona kweDuty Mobile
Locus ndiyo yakanakisa sniper pfuti muCOD Nhare, kunyangwe vazhinji vasingabvumirani nechirevo ichi, sezvo DL Q33 ichikwikwidza zvine mutsindo munhangemutange yepfuti yepamusoro yeCOD Mobile. Kutanga, ngatitaure nezve zvakanyanya kukosha zvinhu zvepfuti ye sniper: kukuvadzwa, kurongeka, uye huwandu. Mune ese matatu maficha, iyo Locus iri nani kupfuura mamwe mapfuti. Kukuvadzwa kwayo ndeye 95. Zvisinei, iyo chete nzvimbo iyo DL Q33 inopfuura pamusoro peLocus inotarisana, ine chete 5 points yakakwirira kupfuura yekupedzisira.
Pfuti dze sniper dzinouya pedyo neLocus ndiyo DL Q33 uye Outlaw, asi yekare inodarika iyo yekupedzisira maererano nehuwandu, iyo 99. Unogona kuwana Locus zvishoma zvishoma maererano nekumhanya kwemoto, asi hey, pano. tiri kutaura nezve akanakisa sniper pfuti muCOD Mobile, uye dzimwe nguva unongopfura kamwe chete. Saka chinangwa ndechekukuvadza zvakanyanya mukupfura kamwe chete.
Ndichiri kuyedza Locus, ndakaona kuti headshot inogona kudzikisa muvengi wako HP kubva 150 kusvika 7, uye kana iri yemuviri yakapfura inodonha kubva pa150 kusvika 55 (isina vest bulletproof).
Ehe, kuwanda kwekukuvara kunosiyana zvakare zvichienderana nekure uye kufamba kwemuvengi, asi ini handina kuwana chero imwe sniper inokwanisa kukuvadza zvakanyanya mukupfura kumwe chete. Izvo zvinoita kuti Locus ive yakanakisa sniper pfuti muCOD Mobile.
DL-Q33 muKufona kweDuty Mobile
Iyo DL Q33 ndiyo yakanakisa sniper pfuti muCOD Nhare yevazhinji vatambi. Kunyanya nekuti pfuti yakavimbika kwazvo mukurwa, zvese mukati Battle Remake kupfuura mune Multiplayer; zvisinei, izvi zvakare debatable. Nenzira, kana iwe ukatarisa zviverengero, iyo Artic .50 inoita kunge ine nhamba dzakanaka zvakare, asi iyo DL-Q33 iri nani sniper pfuti munzira dzese. Pamusoro pezvo, iwe uchaona kana mushure memitambo mishoma nezvombo zvese zviri zviviri iyo DL-Q33 ndiyo yaunoda kushandisa kupfura muCOD Nhare.
DL-Q33 inopa kukuvadzwa kukuru kwe90, kunyatsoita makumi mashanu nepfumbamwe, uye huwandu husingadaviriki hwe59. Zvino ngatitaurei nezve zvinoita kuti DL-Q99 ive yechipiri yakanakisa sniper pfuti muCOD Mobile! Zvikonzero zvikuru kukuvara kwayo uye huwandu hunouraya umo iyo DL Q33 inogona kupfura. Iyo DL-Q33 inouya yakashongedzerwa nebipod nekukasira, iyo inoderedza zvakanyanya kudzoreredza kwayo, kunyanya kana vatambi vakarara vakada kupfura.
Iyi pfuti yepfuti inodonha zvakare ishoma pane mamwe, izvo zvinogona kunge zviri nekuda kwehuwandu hwayo hwemapfuti makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe. Kana zviri zvekukuvara, mumusoro mumwechete weDL-Q99 unowedzera muvengi HP kubva pa33 kusvika gumi, nepo pfuti yemuviri inovawedzera kubva pa150 kusvika makumi matatu, pasina vheti, chokwadi. Ehe, iwe ungatarisira kuita kwakadai kubva kune imwe yeCOD Mobile's best sniper pfuti.
Yechipiri yakanakisa sniper pfuti muKufona kweDuty Nhare ndiyo Outlaw. Ane kukuvara kwe90, kurongeka kwe71, uye huwandu hwe90, izvo zvinomuunza padyo neLocus. Iyo Outlaw ndiyo COD Mobile's best sniper maererano nekurongeka, uye pfuti ye sniper inoratidza huchokwadi hwepamusoro pakati pese COD Mobile's sniper pfuti. Nekudaro, Locus ichiri kupfuudza iyo Outlaw nekukuvara kuri nani uye iri nani pfuti renji kupfuura yekupedzisira.
Izwi rezano: Kana iwe uchida kugona iyo Outlaw uye kudzora kudzoreredza kwayo, ita shuwa yekubatanidza inodzikamisa modulator kune chombo, icho chinogona kuwanikwa chero papi pamepu yehondo royale. Kana iwe uri kuishandisa mune yevazhinji modhi, chaunofanirwa kuita kuigadzirisa neakakodzera zvishongedzo kuti udzore zvirinani pfuti ye sniper; nekuti mumaoko akanaka, iyo Outlaw ndeimwe yeakanakisa sniper pfuti muCOD Mobile.
Verenga zvakare: Nzira Dzakanakisa dzekubata neAmazon kune Rubatsiro Kana Uine Dambudziko neAccount Yako
Iwo Akanakisa Sniper Pfuti muCOD Nhare: Ndeipi Yaungasarudza?
Saka, heano akanakisa COD Mobile sniper pfuti dzaunogona kutamba nadzo. Zvisinei, izvozvo hazvirevi nguva dzose kuti chimwe chombo meta; mhedzisiro yacho zvinoenderana nevatambi uye mashandisiro avanoita pfuti. Zvakare, ramba uchifunga kuti idzi pfuti dze sniper, kunyangwe dziri dzakanakisa muCOD Nhare kana kwete, handizvo zvega zvinhu zvauchazoda kuhwina hondo sezvo zvimwe zvinhu zvakawanda zvinokanganisa mutambo wemutambo. Zvakadaro, ndinovimba chinyorwa ichi chichakubatsira iwe nguva inotevera kubvisa iyo vavengi kubva kure! Tiudzewo mune izvo zvaunofunga kuti ndiyo yakanakisa sniper pfuti muCOD Mobile?
Iwo akanakisa maLMG muMwaka 9 wekufona kweDuty Mobile
Unoziva sei kana munhu akablocker nhamba yako?